Ihe omimi: Isi ihe di iche n'agbata Alt Text na isi ihe oyiyi
Ugbu a, ihe oyiyi na-aghọ ihe bara uru nke weebụsaịtị. WordPress enyela ọtụtụ ụzọ na-agbakwunye ihe oyiyi na ọdịnaya weebụ, na ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla web web nwere ike ime ya na nkeji nkeji. Otú ọ dị, ọ dị mkpa iwepụta oge gị mgbe ị juputara "Nkọwa Njikọ" nke ihe oyiyi. Kpọmkwem, mee ka ojiji kachasị ihe oyiyi Alt na mkpado nke ihe oyiyi gị. Jason Adler, Semalt Onye Ọrụ Gbasara Ndị Ọrụ, na-echetara na njirimara abụọ a na-ekpebi uru mmekọrịta nke oyiyi na ogo ya na SERPs. Ha na - eme ka onye ọrụ na - akawanye mma ma si otú ahụ nyere aka ịmepụta aha ọma maka saịtị gị - subdominio hosting.
Gịnị bụ onyinyo Alt Text na aha aha na WordPress?
Alt Text, ma ọ bụ ederede ọzọ, na-agbakwunye nkọwa nkọwa ahụ iji rụọ ọrụ dị ka onye na-edebe ebe ọ bụrụ na onyinyo ahụ na-ewe oge iji kwụọ ụgwọ ma ọ bụ na ọ dịghị arụ ọrụ. Kama onye nleta ahụghị ihe ọ bụla (nke nwere ike ịmepụta ahụmahụ njirimara ọjọọ), ha na-ahụ nkọwa nke oyiyi ahụ - Alt Text.
Alt Text abụghị naanị maka ndị ọrụ ma maka engines ọchụchọ . Mgbe igwe nyocha dị ka Google na-agbawa weebụsaịtị, ọ pụghị ịgụ ihe oyiyi, ma ọ nwere ike ịgụ Alt Text. Ọ bụrụ na akụrụngwa a kachasị mma, engine search na-enye ihe oyiyi ahụ ma si otú a nwee ọkwa dị elu na nsonaazụ ọchụchọ.
Nchịkọta isiokwu na-eme ọtụtụ saịtị gị. Mgbe ị na-ebugharị poopu pointer n'elu ihe oyiyi, ị nwere ike ịchọpụta na ederede nkọwa ụfọdụ na-apụta. Nke ahụ bụ aha aha, ọ na-enyekwa nghọta nke ọma banyere onyinyo ahụ..Nke ka mkpa, aha ahụ na-enyere ndị na-agụ akwụkwọ aka na-ahụ ihe nhụcha anya iji ghọta ihe oyiyi ahụ. Dika ozo, ndi njem a na-eji usoro nyocha ihuenyo iji gua ihe di n'ime weebụsaịtị. Mgbe ngwanro rutere ebe oyiyi ahụ dị, ọ na - agụ isiokwu nke onyinyo ahụ maka onye ọrụ. Ọ bụrụ na enweghi aha ọ bụla onye na-agụ ihe ngebichi anaghị eweghachite ihe ọbụla ma wega akụkụ nke ọzọ nke ọdịnaya ahụ ọ nwere ike ịgụ.
Na-agbakwunye ihe oyiyi Alt Text ka oyiyi na WordPress
E nwere ụzọ abụọ ị nwere ike isi tinye iji tinye Alt Text na ihe oyiyi gị. Ị nwere ohere ịgbakwunye ederede mgbe ị na-ebugharị ihe oyiyi ahụ site na iji ngwa ntinye mgbasa ozi wuru ewu nke WordPress nyere. Usoro nke ọzọ gụnyere ịmepe ọbá akwụkwọ mgbasa ozi, chọta ihe oyiyi ahụ na ịpị njikọ Njikọ dị n'okpuru foto ahụ.
Na-agbakwunye aha aha na WordPress
Ọ dị mkpa iburu n'uche na okwu ahụ bụ "aha oyiyi" na WordPress nwere ike iji mee ihe abụọ dị iche. Mgbe ị na-ebugo ihe oyiyi site na iji ntinye mgbasa ozi WordPress, ị ga-ahụ ubi aha. Edere ederede ị banyere na mpaghara a aha, ma ọ na-eji akwụkwọ ntanetị mgbasa ozi nke WordPress gosipụta ndepụta nke ihe oyiyi na faịlụ ndị ọzọ na mgbasa ozi na ọbá akwụkwọ gị. Otú ọ dị, nke a abụghị aha ndị ọbịa ga-ahụ mgbe nko pointer nọ n'elu onyinyo ahụ.
Nke a bụ otu esi tinye isiokwu nchịkọta ị chọrọ ka ndị ọrụ hụ:
Ọ bụrụ na ị na-eji editọ editọ edetu, ị nwere ike pịa na onyinyo ahụ wee dezie bọtịnụ. Na popup ihuenyo nke gosipụtara, pịa Nhọrọ Di elu, a na-enyekwa gị nhọrọ iji gbakwunye àgwà aha ahụ.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ide koodu HTML, jiri ederede ederede ịgbakwunye aha aha ahụ.
Ma oyiyi Alt Text na aha dị mkpa maka saịtị ahụ. Jiri ha ka ha nye ihe oyiyi gi na ihe ndi ozo. Gbaa mbọ hụ na gị niile ihe oyiyi WordPress na-labeled na kachasị Alt ederede na utu aha. Ị ga-agbanye saịtị gị nzọụkwụ na-aga n'ihu ịkwado ogo na SERPs, ọ ga-abụkwa ndị enyi na enyi.